ဆောင်းပါး > Josepf Tkach ၏ > ဘုရားသခငျ့အလုပျများမှာ
Ein neues Jahr beginnt in dieser unruhigen Welt, während wir unsere erstaunliche Reise weiter und tiefer in das Reich Gottes fortsetzen! Wie Paulus schrieb, hat uns Gott bereits zu Bürgern seines Reiches gemacht, als er uns „von der Macht der Finsternis errettet und uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden“ (Kol. 1,13-14) ။
သေသွားတဲ့သူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမင်းကြားဖူးတယ်၊ ပြီးတော့နိုးလာပြီး“ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်” ဆိုတဲ့တံဆိပ်ပါတဲ့ကြီးမားတဲ့ရွှေဂိတ်တံခါးရှေ့မှာယေရှုရှေ့မှာရပ်နေတယ်။ သခင်ယေရှုက“ သင်သည်ကောင်းကင်သို့သွားရန်အချက်တစ်သန်းလိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့အကောင့်ထဲထည့်နိုင်အောင်သင်လုပ်ခဲ့သမျှကောင်းတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောပြပါ။ သန်း ၁၀၀ ရောက်ရင်တံခါးကိုဖွင့်ပြီးဝင်ခွင့်ပေးပါ
ထိုသူက“ ကြည့်ရအောင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအမျိုးသမီးနှင့်အိမ်ထောင်ကျသည်မှာအနှစ် ၅၀ ရှိပြီးမည်သည့်အခါကမျှသစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်လိမ်လည်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ” ယေရှုက“ ဤအရာသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်၏။ ခင်ဗျားဆီမှာသုံးမှတ်ရတယ်။ ” သူကပြောတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကျွန်ုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောတက်ရောက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏စုံလင်သောဆယ်စုတစုအကြောင်း။ ငါ့လက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ ဒီအရာအားလုံးအတွက်ငါဘာရမလဲ။ ယေရှုသည်သူ၏အချက်ပြဇယားကိုကြည့်။ “ ၂၈ မှတ်သည်။ ဒါကသင့်ကို ၃၁ မှတ်ရစေသည်။ သင်လိုအပ်သမျှသည် ၉၉၉၉၆၉ ဖြစ်သည်။ သင်ဘာလုပ်ခဲ့သေးလဲ ထိုသူသည်ထိတ်လန့်သွား၏။ “ ဒါကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ” ဟုသူညည်းတွားသည်။ ၃၁ မှတ်သာရသည်။ သူကဒူးထောက်ပြီး“ သခင်၊ အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနားတော်မူပါ” ဟုအော်ဟစ်ခဲ့သည်။ "တစ်သန်းအချက်များ။ အထဲဝင်ပါ!"
“ သင်တို့သည်ဒုစရိုက်များနှင့်အပြစ်များကြောင့်သေလွန်ကြ၏။ ထိုသူတို့တွင်ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အလိုဆန္ဒများနှင့်အညီအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးကိုယ်ကာယနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏အလိုကိုဆောင် ခဲ့၍ အခြားသူများကဲ့သို့ပင်သဘာဝအားဖြင့်အမျက်ဒေါသကလေးများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်၊ အပြစ်များနှင့်သေလျက်ရှိသောငါတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားကျေးဇူးပြု။ ၊ ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဆောင်။ ၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ။ ကောင်းကင်အရပ်၌နေရာပေးတော်မူပြီ။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ။ ငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်၌ပြု ပြင်၍ ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏။
Was könnte ermutigender sein? Unser Heil hängt nicht von uns ab – es hängt von Gott ab. Weil er uns so sehr liebt, hat er in Christus alles getan, was notwendig ist, um es sicherzustellen. Wir sind seine neue Schöpfung (2 Kor. 5,17; ကောင်မလေး 6,15). Wir können gute Werke tun, weil uns Gott von den Ketten der Sünde befreit und uns für sich selber beansprucht hat. Wir sind das, wozu Gott uns gemacht hat, und er befiehlt uns, dass wir in der Tat das sein sollten, was wir sind – die neue Schöpfung, zu der er uns in Christus gemacht hat.